सेतीपोखरीको पहुँच गुदेल हवाईमैदान टिकाउने आधार « Emakalu Online
नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोशी हुन् । सप्तकोशीको सहायक नदीहरुमध्ये एउटा नदी हुंगाखोला हो । हुंगाखोलाको मुहान सेतीपोखरी हो । यो पोखरी सोलुखुम्बु जिल्लाको पासाङल्यामु र महाकुलुङ गाँउपालिकाको सिमा नजिक महाकुलुङ गाँउपालिकामा पर्दछ । यो पोखरीलाई हुंगाखोला बग्ने दक्षिणतिरबाट बाहेक सबैतिरबाट हिमालहरुले घेरिएको छ । उक्त उपत्यकालाई ‘सेतीपोखरी उपत्यका’ भनिन्छ । सेतीपोखरीलाई मेरापिक, आम्फु ग्याप्जेन, आम्फु १, बरुञ्जे, हुंगु (सुरा पिक), हुंगु चुली १, हुंगु चुली २, चाम्लाङ, चारपाटे र चोपोलु जस्ता हिमालहरुले वरिपरीबाट घेरिएका छन् । तर यी उपत्यकामा प्रवेश गरेर उक्त हिमालहरु हेर्न वा आरोहण गर्न भने हरेक पर्यटकले कम्तिमा ५,४१५ मिटरको उचाई पार गरेर जानु पर्ने हुन्छ ।
माथीको फोटोमा रातो रंगको गोलाकार सेतीपोखरी उपत्यका हुन् । गोलाकारको बायाँ मेरापिकको छेउको निलो रङको ठुलो थोप्ला मेराला पास हुन् । त्यसपछि घडीको सुईको बाटोमा क्रमस अरु निलो थोप्लाहरु मिङबोला पास, आम्फुलाप्चा पास र शेर्पेनीकोल पास हुन् ।
हाल सेतीपोखरी प्रवेश गर्न पर्यटकहरुले ४ वटा बिकल्पहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । पहिलो विकल्प सोलुखुम्बुको लुक्ला, खरिखोला वा बुङबाट कोठे, खहरे हुदै ५,४१५ मिटरको मेराला भञ्ज्याङ पास गरेर, दोस्रो बिकल्प लुक्लाबाट नाम्चे, ट्याङबोचे हुदै ५,८१७ मिटरको मिङबोला भञ्ज्याङ पास गरेर, तेस्रो बिकल्प लुक्लाबाट नाम्चे, छिकुङहुदै ५,८०० मिटरको आम्फुलाप्चा पास गरेर र चौथो बिकल्प संखुवासभाको टुम्लिङटारबाट सेदुवा, मकालु बेसक्याम्पहुदै ६,३०० मिटरको शेर्पेनीकोल पास गरेर । यती कठिन भञ्ज्याङहरु पार गरेर प्रवेश गरिने उपत्यकाको सबैभन्दा गहिरो भाग खोङमाडिङमा हो, जो ४,७५० मिटरमा पर्दछ ।
एसियाका देशहरु, म्यानमार, पाकिस्तान, भारत, भुटान, नेपाल र टिब्बतका उच्च हिमाली क्षेत्रहरु हुदै बिकास गरिएको करिब ४,५०० किलोमिटर लामो हिमाली पदमार्गलाई ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ भनिन्छ । यो विश्व चर्चित पदमार्ग पनि यही सेतीपोखरी उपत्यका भएर जान्छ ।
कति पर्यटक जान्छन् सेतीपोखरी उपत्यका ?
पर्यटन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०१९ मा ४२७ टिमले मेरापिक चढेका थिए । जसमा १,२९१ पुरुष र ४३७ महिला गरी जम्मा १,७२८ जना थिए । त्यस्तै मन्त्रालयको अर्को तथ्यांङ अनुसार २०१९ मा बरुञ्जे हिमालको एक्सपेडिसन ४ टिमले चलाएका थिए भने त्यसमा जम्मा ३३ जना सामेल थिए । बरुञ्जेपछि दोस्रोमा चाम्लाङ एक्सपेडिसन ३ समुहले चलाएका थिए, जसमा १९ जना आरोही सामेल थिए । त्यस्तै गरी आम्फु १, हुंगु (सुरा पिक) र हुंगु चुलीमा एक एक टिमले एक्सपेडिसन चलाएका थिए । उक्त तीन हिमालहरुमा जम्मा ६ जना सदस्यहरु सामेल थिए । यी सबै हिमालहरु सेतीपोखरी उपत्यकामा पर्दछन् ।
यस हिसाबले हिमाल आरोही पर्यटकहरु मात्र बार्षिक करिब १,८०० देखी २,००० सम्म सेतीपोखरी जाने गर्दैछन् । तर माथीको ४ भञ्ज्याङहरु पार गरेर ट्रेकिङको लागी सेतीपोखरी प्रवेश गर्ने उच्च हिमाली पदयात्रीहरुको तथ्यांङ्क भने पाईएको छैन । उनीहरुको संख्या कम्तीमा हिमाल आरोहण गर्नेहरुको भन्दा डबल मात्र राखिदिँदा पनि करिब ६००० देखि माथीका संख्यामा पर्यटकहरु बार्षिक रुपमा सेतीपोखरी प्रवेश गर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कति खर्च गर्छन् सेतीपोखरी जानेहरु ?
‘अपर ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ को नेपाल खण्डमा ५ हजारभन्दा माथीका १० वटा भञ्ज्याङहरु पास गर्नुपर्दछ । ति १० वटा कठिन भञ्ज्याङहरुमध्ये सबैभन्दा बढी उचाईको भञ्ज्याङ शेर्पेनीकोल ६,३०० मिटर पास गर्नेहरु सेतीपोखरी पुग्छन् । शेर्पेनीकोल बाहेकका बाँकी ३ भञ्ज्याङहरु पनि ५,४०० माथीका छन् । यस हिसाबले सेतीपोखरी नेपालकै उच्च हिमाली पदयात्रीहरु र पर्वतारोहीहरु जाने ठाँउ हो । ब्यवस्थापन पनि त्यही अनुसार नै गरेर जानुपर्ने भएकोले अत्याधिक खर्च गर्नेहरु मात्र सेतीपोखरी जान्छन् । सायद नेपालको सबैभन्दा महंगो पदयात्रा यही उपत्यकामा हुन्छ ।
सरकारी तथ्यांङ्क अनुसार बार्षिक करिब १० देखि १२ टिमले त्यो उपत्यकामा एक्सपेडिसन चलाउछन र हरेक टिममा सरदरमा ५ देखि ६ जना रहने गर्दछन् । हरेक टिमले कमसेकम ५० देखि १०० जना नेपालीलाई रोजगारी दिन्छन् । त्यस हिसाबले हेर्दा एक्सपेडिसन चलाउनेहरु थोरै संख्यामा भए पनि बार्षिक अरबौको खर्च गर्छन् । ६० जना एक्सपेडिसन चलाउने पर्यटक हुनु भनेको सरदरमा एक्सपेडिसनको समय एक महिना राख्दा पनि १,८०० जना ट्रेकिङ जानु जतिको हुन्छ ।
सडक विकासले सेतीपोखरीको पहुच महाकुलुङको पोल्टामा
विगतमा सडक विकास नहुँदा सेतीपोखरी जाने एउटै मात्र पदमार्ग लुक्लाबाट थियो । अहिले सोलुखुम्बुको तल्लो क्षेत्रमा सडकको विकास भएसंगै अब सेतीपोखरी जान २ वटा विकल्पहरु थपिएका छन् । पहिलो विकल्पका खरिखोला पाङगोम हुदै इङखु उपत्यका प्रवेश गरेर मेराला हुदै र दोस्रो विकल्प महाकुलुङको छेस्काम, मुद्विहुदै सिधै हुंगा उपत्यका भएर । महाकुलुङ छेस्कामको मुद्विहुदै सेतीपोखरी जाने पदमार्गको लागी विगत एक दशकदेखि पहल हुदै आएको छ । यो प्रस्तावित नयाँ पदमार्ग सेतीपोखरीबाट हुंगा खोलाको किनारै किनार बनाईने भएकोले कुनै उच्च हिमाली भञ्ज्याङ पार गर्नु पर्दैन । यो पदमार्ग बनेपछि तीन विकल्पहरु मध्ये सबैभन्दा छिटो महाकुलुङहुदै सेतीपोखरी पुगिनेछ ।
प्रस्तावित यस नयाँ पदमार्ग सम्पन्न भएमा काठमाडौंबाट लुक्ला प्लेनमा गएर छुताङगा हुदै जानुभन्दा कम्तीमा एक दिन अगाडी खोङमाडिङमा पुगिन्छ । त्यस्तै लुक्लाबाट पैया हुदै वा फाप्लुबाट खरिखोला हुदै जानुभन्दा कम्तिमा ३ दिन अगाडी खोङमाडिङमा पुगिनेछ । यसकारण यो पदमार्ग प्रयोगमा आएमा सेतीपोखरीको पहुँच महाकुलुङको पोल्टामा जाने सम्भावना छ । पर्यटकहरुले साहशिक यात्रा मन पराउने भएकोले पुरानै पदमार्ग प्रयोग गर्न सक्लान् तर कम्तीमा पनि उनीहरुको यात्रा ब्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने खाद्यपदार्थहरु मात्र यो सजिलो पदमार्गहुदै निर्यात गर्दा पनि स्थानीय महाकुलुङका जनतालाई ठुलो आर्थिक लाभ मिल्नेछ ।
प्रस्तावित नयाँ पदमार्ग उद्वार मार्ग पनि
सेतीपोखरी उपत्यका जाने पर्यटकहरु उपत्यकामा प्रवेश गरेर हिमपात शुरु भएको बेला वा कोही पर्यटक वा पर्यटनकर्मी बिरामी भएको बेला यी ४ वटा ५,४०० भन्दा माथीका उच्च हिमाली भञ्ज्याङहरु पास गर्न नसकेर हेलिकप्टरबाट उद्वार गरिनुपर्ने हुन्छ तर धेरै पटक मौसम बिग्रेको बेला हेलिकप्टर बस्न नसक्दा खोङमाडिङमामा थुनिएर बर्बाद हुने गर्दछ । प्रस्तावित यो पदमार्गले खोलाको किनारै किनार कुनै भञ्ज्याङ पार गर्न नपर्ने भएकोले एउटा गतिलो उद्वारमार्गको काम गर्नेछ । खोङमाडिङमा ४,७५० मिटरबाट ५,४१५ मिटरको मेराला हाई क्याम्प पुग्ने दिन यो नयाँ पदमार्गबाट ३,६०० मिटरको वातेल्मा दोभान आईपुगिन्छ ।
प्रस्तावित नयाँ पदमार्गको अवस्था:
विगत धेरै वर्षदेखि यस पदमार्गको पहल गरिए पनि सुविधासम्पन्न बाटो बन्न सकेको छैन । जसोतसो हिडन सक्ने अवस्थाको बाटो अहिले बनेको छ तर मुख्य समस्या बाटोमा पुल बनेको छैन । गोपिचौंरबाट वातेल्मा दोभान झरेको दिन वातेल्मामा एउटा काठको पुल बनेको छ तर वातेल्माबाट सग्गोल दोभान हिडेको दिन लुङतुम्मा भन्ने ठाँउमा एउटा झोलुंगे पुल अनिवार्य चाहिन्छ ।
त्यो बन्न बाँकी नै छ । त्यस्तै सग्गोल खोला र वेइखो खोलामा पनि पुल निर्माण गर्न जरुरी छ । यी ३ ठाँउमध्ये कम्तीमा लुङतुम्मा भन्ने ठाँउमा एउटा झोलुंगे पुल नबन्दासम्म यो पदमार्ग प्रयोगमा ल्याउन गारहौ छ तर सग्गोल र वेइखो खोला सानो भएकोले बसन्त ऋतुमा पुल अनिवार्य छैन । यसबाहेक पदमार्गको स्तरोन्नतीको पनि आवश्यकता छ ।
महाकुलुङमा पर्यटन ल्याउने अन्य २ पदमार्गहरु सेतीपोखरी उपत्यकाबाट बाहिर निस्कने ४ वटा भञ्ज्याङहरुमध्ये मेराला भञ्ज्याङ पास गरेर लुक्ला वा फाप्लुतिर फर्किदा इङखु उपत्यकामा प्रवेश गरिन्छ । इङखु उपत्यका खासगरी मेरा हिमाल चढनेहरुको कारणले पर्यटकीय क्षेत्र स्थापित भएको हो । यो उपत्यकाबाट दक्षिणतिर करिब ५ हजार मिटर माथीको एउटा हिमाली भञ्ज्याङ पास गर्दा त्यहाँ पबित्र धार्मिक स्थल पाँचपोखरी भेटिन्छ ।
माथीको फोटोमा रातो गोलाकार सेतीपोखरी उपत्यका हुन् । सेतीपोखरी उपत्यकाबाट हरियो धर्काले देखाईएको बाटो अलि तल वातेल्मासम्म आउछ । वातेल्माबाट एउटा हरियो धर्का खोलाको किनारै किनार आउछ । त्यो बाटो छेस्कामको मुद्वीखर्क आउने प्रस्तावित नयाँ बाटो हो । अर्कोबाटो उकालो डाँडैडाँडा जान्छ । त्यो बाटो केन्पा कमिरे जाने बाटो हो । जहाँबाट महाकुलुङको गुदेल पनि जान सकिन्छ वा संखुवासभाको चित्रेहुदै तुम्लिङटार पनि जान सकिन्छ । बाँकी तेस्रो हरियो धर्काले देखाईएको बाँयातिर छेउको बाटो बुङबाट पाँचपोखरीहुदै इङखु उपत्यका जोडने बाटो हुन् ।
त्यो पाँचपोखरी हुदै महाकुलुङको बुङ आउने पदमार्गको लागी महाकुलुङ गाँउपालिकाको पहलमा यसपटकको बढीजसो पर्यटन विकासको बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
कतिपय पर्यटकहरु इङखु उपत्यकाबाट कोठे, ठुलीखर्कहुदै थोलडाँडा पास गरेर लुक्ला पनि जाने गर्दछन् । तर सडक विकासको कारणले बढीजसो कोठेबाट, शिबुजे, पाङगोमहुदै पर्यटकहरु खरिखोला जाने गर्दछन् । पाङगोमसम्म निकट भविष्यमै सुविधासम्पन्न सडक विकास हुने नै छ । त्यसले विदेशी पर्यटकहरुलाई त्यो पदमार्ग सजिलो र सिधा हुनेछ । त्यसकारण पहिलो त सेतीपोखरी उपत्यकाको जति पर्यटक इङखु उपत्यकामा छैनन् । दोस्रो कुरा भएको पर्यटक पनि तीनतिर विभाजन भएर थोरै मात्र महाकुलुङतिर तान्न सकिने अवस्था छ । यद्यपी स्थानीय सरकार प्राथमिकताका साथ यो पदमार्गमा लगानी गरिरहेको छ ।
सेतीपोखरीबाट प्रस्तावित मुद्विसम्मको पदमार्ग भएर एकदिनमा वातेल्मा दोभान आउन सकिन्छ । वातेल्मा दोभानबाट मुद्वितिरको बाटो छोडेर हुंगाखोला पार गरी दक्षिणपूर्वतिर लाग्ने हो भने ५,२०० मिटरको देउराली पास गरेर टिवागैरी पुगिन्छ । यो पदमार्ग चलाउने हो भने वातेल्मा खोलामा एउटा पुल अनिवार्य चाहिन्छ । पुल तरेपछि शिकारी लुबम हुदै देउरालीसम्म बाटो निर्माण गर्नु पर्दछ । टिवागैरीबाट पवित्र धार्मिक स्थल कालपोखरी गौबित्ता भएर केन्पा आउन सकिन्छ । केन्पाबाट भैसिरी, मार्मेकु हुदै वा बुकुर पिक गएर मार्मेकु हुदै गुदेल जान सकिन्छ । त्यस्तै केन्पाबाट बोक्सिवार, छेम्सी हुदै बुङ पनि जान सकिन्छ । तर यो पदमार्गबाट केन्पा कमिरे आईपुगेका पर्यटकहरु गुदेल वा बुङ नआईकन संखुवासभाको चित्रे हुदै तुम्लिङतारतिर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । चित्रेलाई निकट भविष्यमै सुविधासम्पन्न सडक विकासले जोडने नै छ । महाकुलुङले यो पदमार्गमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ, यद्यपी यसपदमार्गहुदै बर्षमा कतिसम्म पर्यटक महाकुलुङ भित्राउन सकिन्छ ? वास्तविक आँकडा निकालेर लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्न जरुरी छ ।
महाकुलुङमा पर्यटन विकासको विषयमा जब छलफल हुन्छ । एकथरीले संसारभरीका पर्यटक महाकुलुङ हेर्नकै लागी नेपाल आउछन् वा महाकुलुङ हेर्नकै लागी नेपाल आउनेगरी महाकुलुङमा पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । तर अर्कोथरी भने खासगरी पर्यटक हिमालतिर जान्छन् र त्यसैबेला महाकुलुङ पनि हेर्दै जाने भएकोले हिमालतिर जाने पदमार्गसंग महाकुलुङलाई जोडनुपर्छ भन्ने छन् । यसलाई छोटकरीमा महाकुलुङ हेर्न जान्छन् कि हेर्दै जान्छन् ? भन्ने बहस भन्न सकिन्छ ।
महाकुलुङलाई नै अन्तिम गन्तब्य बनाएर पर्यटक नेपाल आउछन् भन्नेहरुले पर्यटनको विकासको कुरा गर्ने बित्तिकै कि त त्यहाँको एउटा झरना प्रमोसनको लागी वा एउटा बिशाल ताल निर्माणको लागी वा ४ हजार मिटरको एउटा पिक प्रमोसनको लागी वा आदिवासी संग्रालयको लागी बजेट माग्छन् । पर्यटक हिमालतिर जाने भएकोले महाकुलुङलाई हेर्दै जान्छन् भनेर सोच्नेहरु जहिल्यै पनि हिमालसंग जोडने पदमार्ग विकासको मात्र कुरा उठाउछन् । पदमार्ग विकासमा प्रमुखरुपमा यीनै माथीका ३ वटा पदमार्गहरुको कुरा उठने गर्दछन् । तर यी हामीले उठाईएका कुराहरुले महाकुलुङमा कति पर्यटक ल्याउछन् भन्ने कुराको लेखाजोखा हुने गरेको छैन । पहँच र पावरको भरमा जथाभावी खर्च हुने गरेको छ ।
Bukur Mahakulung in Summer. Photo by Ram Bahadur Kulung
यो पृथ्वीको ३ भागको एक भाग समुन्द्र र ताल छन् । नेपाल मात्र हिमालको काखमा भएकोले समुन्द्र र ताल नभएको देश हो । अन्यथा प्राय सबै देशहरुमा टोलैपिच्छे ताल छन् । बढी जसो देशहरुलाई समुन्द्रले छोएकै छन् । ति देशका पर्यटकहरु मान्छेले बनाएको ताल हेर्न कै लागी पेल्माङ आउछन् जस्तो मलाई लाग्दैन । के तपाई मलेशियाले हिमाल बनायो भने हेर्न जानुहुन्छ ? तर कहिल्यै हिमाल नहेर्ने र हेर्न जान नसक्ने त्यही मलेशियाका स्थानीयहरु भने जालान् । त्यस्तै हो, पेल्माङमा ठुलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएको ताल हेर्न बढीमा बुङ, सोताङ, गुदेल वा छेम्सीसम्मका मान्छेहरु आउलान् । तर ति वरिपरीका स्थानीय पर्यटकहरुले पेल्माङमा खर्च चाही कति गर्छन् ? यद्यपी दिशापिसाप वा फोहर भने अवस्यै गर्नेछन् । के महाकुलुङमा हामीले खोजेको पर्यटक यस्तै हुन् ? हाम्रो किराती पुर्खाले सिर्जना गरेको त्यो बस्ती हामीलाई गर्व लाग्छ ।
तर हाम्रा पुर्खा फ्लोरेन्स नाईटिङगेल जस्ता अरुको सेवा गरेर संसारमा चिनिएका पनि होइन वा हिटलर जस्ता क्रुर तानाशाही शाशक पनि थिएन । त्यसैले हाम्रो बस्ती खासै हैतिहासिक सहर होइन । त्यो बस्तीलाई आफ्नो ऐतिहासिक भुमि मान्ने आजका देश विदेशका कुलुङहरुले त त्यो ठाँउलाई गन्तब्य बनाएर आफ्नो होलिडे खर्च गर्दैनन् भने बाँकी विश्व महाकुलुङलाई हेर्नकै लागी नेपाल आउनुपर्ने प्रर्याप्त कारणहरु हामीसंग छैन । तितो तर सत्य यही हो । यद्यपी हामीले विकास गरयौ भने असम्भव केही पनि छैन, गर्ने हो । तर एउटा ताल बनाएर वा पहाडको प्रमोसन गरेर वा झरनाको प्रमोसन गरेर हामीले चाहेको जस्तो खर्च गर्ने पर्यटक महाकुलुङमा उपस्थित गराउन सकिदैन । महाकुलुङमा पर्यटनको विकास गर्ने हो भने कुन ठाँउको विकासले कति पर्यटक ल्याउछ भन्ने कुराको चेत हुन जरुरी छ । राजनीतिक पहँचको आधारमा कनिका छरे जस्तो पर्यटन शिर्षकको बजेट छर्नु कदापी ठिक होइन । बरु पर्यटनमा बजेटै नछुटाउन सकिन्छ ।
के गुदेलमा हवाईमैदान टिक्ला ?
हवाई मैदान भएकोले गुदेल गईन्छ कि जानुपर्ने काम भएर गईन्छ ? एक दुई प्रतिशत मानिस हवाई मैदान भएर हवाईजहाज जाने भएकोले पनि गुदेल जान्छन् होला तर मुलतः जानुपर्ने काम भएरै गईन्छ । त्यसकारण गुदेल हवाईमैदान नियमित संचालन हुनको लागी पर्यटकको चाप अनिवार्य शर्त हुनेछ । यात्रुको चाप भएर मात्र पनि पुग्दैन । यात्रु भन्नाले नेपाली यात्रु हुन् जसले बढीमा प्रति टिकटको रु.४५०० तिर्नेछन् । तर एउटा विदेशी पर्यटकले कम्तीमा पनि प्रति यात्रा १६० डलर तिर्नेछ जुन करिब १८ हजार रुपैया हुनेछ । प्रति यात्रु १८ हजार असुल्न पाउनेगरी टिकट धमाधम बेच्न पाईयो भने बल्ल गुदेलको लागी वायुसेवा कम्पनीहरुले प्लेन उडाउनेछन् । यो तितो सत्य हेर्न र बुझ्न काही पनि जान पर्दैन नजिकैको काँगेलडाँडा बिमानस्थल हेरे पुग्छ । त्यसैले अहिले हामीलाई गुदेलमा हवाईमैदान बनाउनुको मात्र चिन्ता छ ।
बनाएपछि टिकाउनुको चिन्ता अवस्य नै शुरु हुनेछ । त्यो चिन्ताको एउटै मात्र उपाय कमसेकम बर्षमा २००० बिदेशी पर्यटक महाकुलुङ प्रवेश गराउनु हो । त्यसमा सबैभन्दा बढी योगदान मुद्विदेखि सेतीपोखरीसम्मको पदमार्ग निर्माणले गर्नेमा कुनै संका छैन । सेतीपोखरीमा भएका ६,००० पर्यटकहरुमध्ये यो पदमार्ग सम्पन्न गरेर कम्तिमा ५०० मात्र महाकुलुङ झार्न सकेको भए महाकुलुङमा पर्यटन विकासको एउटा माहौंल सिर्जना हुन्थ्यौ । अहिलेसम्म सरकारले त्यो अवसर गुमाएको छ । आगामी दिनहरुमा बेलैमा सोचविचार गरेर रणनीतिक हिसाबले प्राथमिकताहरु तोकेर पर्याप्त लगानी गर्न सकेन भने महाकुलुङमा ‘पर्यटनमा लगानी बालुवामा पानी’ हुनेछ । गुदेलको हवाईमैदान गाईचरण हुनेछ ।